यात्रु बोकेर गुडिरहेको हायसमा अ’चानक आ’गलगी हुदा ज’लेर ध्व’स्त ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारयात्रु बोकेर गुडिरहेको हायसमा अ’चानक आ’गलगी हुदा ज’लेर ध्व’स्त !
यात्रु बोकेर गुडिरहेको हायसमा अ’चानक आ’गलगी हुदा ज’लेर ध्व’स्त !
जनकपुरधाम । शनिबार साँझ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मि’ल्स ए’रिया र थापाचोकको बीचमा एक हायसमा आ’गलगी हुँदा ज’लेर ध्व’स्त भएको छ । आ’गलागी १५ मिनेटमै प्रहरी र स्था’नीयको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको थियो ।
शनिबार साँझ ६ बजेर ४० बजेको समयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय (मधेश भवन) अगाडी पूर्व पश्चिम सडकमा गु’डिरहेको गाडीमा आ’गलगी भएपछि ज’लेर ध्व’स्त भएको हो । पी’डारीचोकबाट भा’नुचोक तर्फ जाँदै गरेको सो हायसमा अचानक आ’गलगी भएको चालकलाई उदृत गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।